Sidee loo xoojiyaa xusuustaada (xitaa haddii aadan helin furayaasha gaadhigaaga) - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Sida loo hagaajiyo xasuustaada (xitaa haddii aadan helin furayaasha gaadhigaaga) - New York Times
Sida loo hagaajiyo xasuustaada (xitaa haddii aadan helin furayaasha gaadhigaaga) - New York Times
Maxaa keenaya bartender wanaagsan? Magacaaga ugu fiican waa suurta gal inuu qofku ku kalsoonaado inuu kuugu qalqaaliyo ka dib burbur, awood maskaxeed oo ka hortagaya macaamiisha xad-gudbaha ah iyo xirfad ay isku dhex daraan cabitaan badan - dhaqso.
Laakiin sano ka hor, markii Gallup waxbartay waxqabadka bartilmaameedyada, waxay heleen wax aan la filayn. Baraha ugu wanaagsan waxay leeyihiin xasuusiyooyin aad u faahfaahsan. Ma ayan xasuustin oo kaliya magaca magacyada dadka caadiga ah; Waxa kale oo ay ogyihiin amarradooda cabitaanka.
Waa maxay xusuusta? Si aad u ogaato, Gallup waxay la shaqeyneysey Allied Breweries si loo abuuro hal boqol oo kooxood, oo bixiya lacag iyo aqoonsi barane kasta oo xusuusin kara magacyada 100 iyo cabitaanada udhaxeeya. Inkastoo lacagta ugu weyn ay ku soo noqotey dhammaan bartilmaameedyada ku soo gala 500 dollars, qabanqaabiyeyaashu waxay ka walaacsan yihiin guusha qof walba. Dhawr sano ka dib, bartilmaameedka Britishka ah ee Janice ayaa la yaabay iyaga oo xusay magacyada iyo cabitaanka macaamiisha 3 000.
Inkasta oo noocan oo kale ah ee xasuusta ay u eg tahay hibo dhalasho, waxay u muuqataa inay tahay xirfad la baran karo. Qaado Joshua Foer, oo ah wariye aan caan aheyn oo u tababaran hal sano oo ugu dambeyntii ku guuleystay magaca horyaalka ee kubada cagta Mareykanka .
"Qof kasta wuxuu leeyahay xasuus wanaagsan," ayuu yiri Foer. my JobLife podcast . "Awoodaha xusuusta ee aan caqli-gal ahayn waa qarsoodi dhammaanteen - haddii aan isticmaalno farsamooyinka saxda ah si aan u toosno."
[Commecequevouslisez? Isku qor halkan si aad u hesho wargeyska Life Smarter-ka oo waxaad heshaa sheekooyin sidan oo kale ah (iyo ka badan!) xaqiiqada ku jirta sanduuqaaga subax kasta subax kasta.
Sidaas daraadeed daraasadaha daraasadda xun ee aad ka baratay dugsiga oo ka bilaw saddexdan talaabood.
Marka hore: Waxaad u nastaa xiisaha habeenkii. Taxane ah aragnimada ardaydu waxay dhagaysteen sheekooyinka kadibna waxay hubiyeen inta macluumaad ee ay xasuustaan ​​saacad ka dib. Waxay dib ugu yeeraan 10 ilaa 30% haddii ay si aan kala sooc lahayn loo xilsaaray inay ku fariistaan ​​oo ay wax ku sameeyaan qol aan mugdi lahayn, qolka aamusan dhawr daqiiqadood kaliya ka dib maqalka sheekada. Maskaxdaadu waxay u baahan tahay nasasho iyo meel si loo xoojiyo oo loo kaydiyo macluumaadka. Tani waxay si gaar ah u tahay dadka qaba dhibaatooyinka xusuusta: marka khibrad la mid ah dadka qaba istaroogga ama dhaawacyada kale ee neerfaha, nasashada nasashada waxay hagaajiyeen dib u soo noqoshadooda 7% ilaa 79% .
Ta labaad: Ha isku dhibin. oo leh caddayn ama muujin. Cilmi baaris ayaa soo saartay inaanay waxba tarin; waxay yihiin kuwo aad u dheereeya. Halkii, iskuday wax firfircoon: is weydii naftaada. Caddayn ballaaran waxay muujinaysaa in imtixaannada tijaabada ah ay u ogolaanayaan in si ka fiican looga feejignaado farsamada kale Markaad dib uga noqotid aqoonta maskaxdaada markale, waxaad ogtahay halka laga helo wakhtiga xiga isla markaana aad si dhakhso ah u ogaato meesha ay ka maqan tahay xusuustaada.
Saddexaad: u sheeg qof. In dhawaan waayo-aragnimo dadku waxay barteen hirarka dhawaaqa iyo saameynta Doppler. (Waad ogtahay, astaamaha ku saabsan sirenka baabuurka booliisku waa mid fiiqan marka uu kuu yimaado oo dhaco markasta oo ay kugu dhaafto.) Dhamaadka waxbarashadooda, ka-qaybgalayaasha ayaa si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyay inay cashar ka qaataan walaxda ama qoraal la'aan. Toddobaad ka dib, waxay soo noqdeen oo ay qasab ku noqotay inay tijaabin tijaabo ah inta lagu jiro xusuusta. Kuwa baray casharka iyada oo aan qoraal ahayn way fiicnaadeen.
Sharaxaadda saamaynta Doppler ee ereyadooda ayaase sii waday. Habka ugu wanaagsan ee aad wax uga baran karto waa in la baro - maaha oo kaliya sababtoo ah sharaxaadda waxay kaa caawineysaa inaad fahamto, laakiin sidoo kale sababtoo ah dib u heliddu waxay kaa caawineysaa inaad xasuusato.
Hada, waxaad tagtaa qol madow iyo aamusnaan daqiiqado 10, hubi inaadan seexan, ka dibna weydii qodobbada muhiimka ah ee maqaalkan oo u sheeg qof kale waxa aad baratay.
Adam Grant oo ah cilmu-nafsi yaqaan ku takhasusay Wharton, waa qoraaga Asal ahaan . " Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan shaqadaada iyo cilaaqaadyadaada, dhegeyso WorkLife oo leh Adam Grant Podcast asalka ah ee TED on sayniska ee qabashada shaqada aan nuugin. Waxaad ka heli kartaa WorkLife on Apple Podcasts ama bogga aad jeceshahay.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) New York Times
VIDEO: Didier DROGBA, sheekada cajiibka ah ee caruurnimadiisa
20 Top 2019: "PornHub waxay ku taallaa booska 8e, Xvideos.com ee 12e, iyo Xnxx.com at 13e. Netflix wuxuu galayaa 17th, Reddit wuxuu galayaa 20e. "